Vaenzi uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Hofisi yeZvapupu zvaJehovha muBritain
Munobhuka sei? Kana muine vanhu vasingapfuuri 20 muboka renyu, bayai pakanzi “Make a Reservation—Fewer Than 20 People.” Asi kana vachipfuura 20, itai zvekufona.
Tinoona nezvebasa rinoitwa neZvapupu zvaJehovha muBritain, Ireland, uye Malta. Tinoshandura mabhuku anotsanangura Bhaibheri mumitauro yakasiyana-siyana kusanganisira mutauro wechiIrish, Scottish Gaelic, chiWelsh uye mutauro wemasaini wemuBritain. Tinorekodhawo mavhidhiyo nezvimwewo zvekuteerera.
“Nhoroondo Yedu”: Nzvimbo iyi inoratidza nhoroondo yekutanga kwebasa rekuparidza muBritain nemuIreland.
“Bhaibheri muBritain”: Nzvimbo iyi inoratidza maBhaibheri asingachanyanyi kuwanika uye inoratidza kushandurwa kweBhaibheri kwemazana emakore akapfuura.
Madhipatimendi eMahofisi eBritain: Nzvimbo iyi inoratidza mavhidhiyo anoratidza kuti basa riri kuitwa sei pabazi reBritain.
Mahofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Britain